Ụlọ Ọrụ na-ahụ maka Ntụliaka, INEC, Etinyela Mkpụrụ Ụbọchị Iri Abụọ na Atọ nke Ọnwa March maka Mmegharị na Mmezu Ntụliaka na Steeti Isii
N'okwu ya ka Onye isi na-ahụ maka mgbasa ozi na nkụzi gbasara ntụliaka, Maazi Festus Okoye, mere ka nkea pụta ìhè ebe ha nwechara ọgbakọ nke ndị isi n'ụlọ ọrụ ahụ, nke lebara anya na otu esiri were mee ntụliaka nke gọvanọ na steeti iri abụọ na iteghete na ụlọ Ome Iwu nke steeti dị narị iteghete na iri iteghete na otu.
Okoye kwuru na "Ndị na-akpọ vootu na Adamawa, Bauchi, Benue, Kano, Plateau na Sokoto kwuru na ntụliaka gọvanọ na steeti ndị a ezughị okè. N'ihi nkea, ụlọ ọrụ ahụ ga-emegharị ntụliaka n'ụbọchị Satọdee, ụbọchị iri abụọ na atọ nke ọnwa March, n'afọ puku abụọ na iri na iteghete ka ewere chịkọta ya bụ Ntụliaka."
Ọ tinyere na mmegharị a ga-adị na ebe dị iche iche na steeti ndị ahụ bụ ebe enweghị ike chịkọta ya bụ ntụliaka. Ụlọ ọrụ INEC ka O kwuru ga-edepụta ebe ndị ahụ o metụtagasiri na website ha ụbọchị Wednezdee.
Okoye kọwara na ihe mere ejighị chịkọta ntụliaka na ebe ndị ahụ bụ maka arụghị ọrụ nke ọma ma ọ bụ arụghị ọrụ machaa nke ìgwè Smart Card Reader. Ọgba aghara na Ntụliaka aka karịrị akarị bụkwazi ihe ndị mere ka ya bụ ntụliaka ghara ị ga nke ọma.
Maazi Okoye tinyere na ụlọ ọrụ INEC ga-ahọpụta ọgbakọ pụrụ iche maka ileba anya na ihe kpatara ọgba aghara nke dị ebe ana agụ vootu na Tafawa Balewa Local Gọọmenti, na Bauchi.
INEC kwukwara na ha ga-ezuko ọzọ were tụlee ntụliaka nke Steeti Rivers bụ nke ọ kọwara na-aga akpachapụrụ anya nke ọma n'ileba ya anya.